Забур 27 CARS - Nnwom 27 AKCB
1Awurade ne me hann ne me nkwagye;
hena na minsuro no?
na hena anim na me ho mpopo?
2Sɛ nnipa bɔne bɔ toa me
pɛ sɛ wokum me,
sɛ mʼatamfo tow hyɛ me so a,
wobehintihintiw ahwehwe ase.
me koma rentu;
mpo sɛ wotu me so sa a,
ɛno mu koraa na minya awerehyɛmu.
4Ade baako na mibisa Awurade;
sɛ mɛtena Awurade fi
me nkwanna nyinaa,
na mahwehwɛ no wɔ nʼasɔrefi.
5Hiada mu no,
ɔde me besie nʼatenae dwoodwoo;
ɔbɛkora me wɔ Ahyiae Ntamadan kronkron mu
ɔde me si ɔbotan so wɔ sorosoro.
6Afei ɔbɛma me ti so
wɔ atamfo a wɔatwa me ho ahyia no so;
mede anigye bɛbɔ afɔre wɔ nʼAhyiae Ntamadan mu;
7Awurade, sɛ misu frɛ wo a, tie me!
8Me koma ka wɔ wo ho se, “Hwehwɛ nʼanim!”
Wʼanim, Awurade na mɛhwehwɛ.
9Mfa wʼanim nhintaw me,
mfa abufuw mpam wo somfo
me boafo ne wo.
Mpo me, na nnyaw me,
10Mʼagya ne me na begyaw me hɔ de,
nanso Awurade begye me.
11Kyerɛ me wʼakwan, Awurade;
fa me fa ɔkwan tee so,
me nhyɛsofo nti.
12Nnyaa me mma sɛnea mʼatamfo pɛ,
nnansekurumfo sɔre tia me
na wopuw awurukasɛm.
13Meda so wɔ saa anidaso yi sɛ:
mehu Awurade ayamye
AKCB : Nnwom 27